Yongeza abaSebenzi: Indlela yokufunda iTrble kunye neBass Clef
Kudala-dala, abafundi bokuqala bomculo beza nenkqubo yemigca kunye neendawo ezibizwa ngokuba yi abasebenzi okanye imeko ukumela amanqaku okanye iipaki. Umsebenzi ngamnye udwelise imigca emihlanu kunye neendawo ezine. Inkqubo ye- isitshixo - nokuba yitreble okanye ibhasi- ikuxelela ukuba ngawaphi amagama oza kuwanika loo migca kunye nezithuba.
modafinil vs adderall ufunda
Qala ngeqhosha elihambahambayo (isandla sakho sasekunene)
Ngokulula, unokucinga ngabasebenzi abaphezulu, ababizwa ngokuba inqanawa yokuhamba, njengenxalenye yesandla sasekunene.
Ukusuka ezantsi phezulu, imigca ngu-E, G, B, D, no-F.
Ngokwesiko abafundi basebenzisa amabinzana ekulula ukuwakhumbula (ebizwa izixhobo ze-mnemonic ) ukucengceleza la manqaku, anje ngokuba wonke umfana olungileyo uyenza kakuhle okanye iindlovu zifumana iinyawo ezinkulu ezimdaka. Abanye bacinga ukhetho lokuqala ngokwesini kuluntu oluchanekileyo kwezopolitiko, kwaye mhlawumbi abanye baziva ngathi le yesibini ihlazisa iindlovu, ezizizidalwa ezintle. Zive ukhululekile ukwenza eyakho!
Imigca yeqa inqaku ixesha ngalinye; loo manqaku - F, A, C, kunye no-E ukusuka ezantsi ukuya phezulu- zibekwe kwizithuba eziphakathi. FACE yinto elula ngokwaneleyo yokubakhumbula, kodwa unokwenza ibinzana ukuba oko kuyanceda. Ke abasebenzi abahambahambayo bamele u-E ngentla embindini u-C ukuya ku-F i-octave ngasentla kumbindi C.
Ukuba ufuna ukuya ngaphezulu okanye ngaphantsi kwabasebenzi, unokongeza nje omnye okanye nangaphezulu imigca emincinci kwinqaku ngalinye ukubonisa ukuba kukude kangakanani okanye kuhla kangakanani. Ke ukuhla usiya kwi-E esezantsi kubasebenzi, une-D kwisithuba esingezantsi, kwaye emva koko inqaku lenqaku elinomgca omfutshane ngalo ukumela inqaku lomgca elilandelayo, phakathi C.
Ekuqaleni kwezifundo zakho zokufunda, kuya kufuneka uchonge amanqaku ngokubala amagama phezulu (okanye ezantsi) ukusuka kumgca wokugqibela wabasebenzi. Ixesha elingaphezulu, uyakufika kwangoko uqaphele amanqaku ngaphakathi kwemigca emibini ngasentla nangaphantsi kwabasebenzi, emva koko kuya kufuneka ubale (okanye ezantsi) kwezo.
Dibana nebass clef (isandla sakho sasekhohlo)
Abasebenzi abaphantsi bomculo wepiyano obizwa ngokuba yi isiseko sebass . Isebenzisa iikhonsepthi ezifanayo njengokushenxiseka okucacileyo kwi, kodwa amagama emigca kunye neendawo zahlukile. I-mnemonics eqhelekileyo yokukhumbula ngentloko kubandakanya Amakhwenkwe aMnandi enza okuhle rhoqo kunye neenja ezinkulu eziLwa nezilwanyana. Okanye unokwenza eyakho.
Izithuba zii-A, C, E, kunye no-G ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Zonke iinkomo zitya ingca yinto elula ngokwaneleyo yokubakhumbula, kodwa njengesiqhelo, unokwenza elinye ibinzana ukuba ukhetha njalo.
Amanqaku angentla nangaphantsi kwe-bass clef staff amelwe ngendlela efanayo nabasebenzi abahambahambayo.
Ukusebenza kwe-sprintec ngokuchasene nokukhulelwa
iziphumo ebezingalindelekanga ze-levofloxacin 500mg
iamlodipine, yenzelwe ntoni?
Zisebenza njani iintsimbi zomnyango
I-pepto bismol kunye ne-tylenol
Yintoni elungileyo ye-gabapentin
ukubulala amakhalane ezinjeni